Milateriga Kenya Oo Qeexay Halka Ay Ku Socdaan Marka Ay Ka Baxaan Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Milateriga Kenya Oo Qeexay Halka Ay Ku Socdaan Marka Ay Ka Baxaan Kismaayo
5th February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Nairobi – Mareeg.com: Milateriga Kenya ayaa ka hadlay halka ay ku wajahan yihiin kadib marka ay ka baxaan magaalada Kismaayo ee xarrunta Jubada Hoose, halkaasoo ay la wareegayaan ciidamada Burundi iyo Sierra Leone.
Afhayeenka cusub ee ciidamada Kenya Col. Willy Wesonga ayaa sheegay in ciidamada Kenya marka ay ka bvaxaan magaalada Kismaayo ay u dhaqaaqi doonaan degmooyin ka tirsan gobolka Gedo oo mid ka ah 3-da gobo lee loo dhisay maamulka Juba.
Afhayeenka oo la hadlay saxaafadda Kenya ayaa sheegay in ay bilaabeen ciidamada Kenya ka bixitaankooda Kismaayo, wuxuuna tilmaamay in qorshuhu yahay iney isku fidiyaan degaano hor leh oo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya.
“Qorshaha degsan waa in ciidamada Kenya ka baxaan Kismaayo iyagoo isku sii fidinaya deegaanada sare ee maamulka Juba…”ayuu yiri Col. Willy Wesonga oo wareysi siiyey jariirada wargeyska The Standard ee kasoo baxda dalka Kenya.
Col. Willy Wesonga ayaa sheegay in ciidamadooda ay isku dayayaan inay gacanta ku wada dhigaan qeybaha weli Alshabaab ka maamulaan gobalka Gedo si ciidamada AMISOM u wada gaaraan dhamaan gobalada uu ka kooban yahay maamulka Juba.
Afhayeenka ayaa sheegay in tiro yar oo kamid ah ciidamada Kenya ay kusii hari doonaan magaalada Kismaayo, kuwaasi oo gacan siin doona ciidamada Sierra Leone oo lagu soo xoojinayo magaalada Kismaayo.
Col. Willy Wesonga ayaa u sheegay dadka Kismaayo iney is dejiyaan, wuxuuna xusay iney la socdaan banaanbaxyadii ay dhigeen reer Kismaayo oo ku doonayeen in ciidamada Kenya sii joogaan KIsmaayo.
Afhayeenka ayaa sheegay in Al Shabaab soo noqon karin, oo ciidamo ku filan Kismaayo kusii sugnaan doonaan, isla markaana ciidamada lagu soo xoojinayo ee Siera Leone iyo Burundi ay yihiin kuwo awood wanaagsan leh.
Midowga Afrika ayaa dhawaan go’aamiyey in magaalada Kismaayo laga saaro milateriga Kenya kadib markii ay dhexdhexaad ka noqon waayeen khilaaf kaga maamulka oo ka aloosmay magaaladaas.
Ciidamada Kenaya ayaa waxaa muuqata ineysan ka weada baxeyn Soomaaliya ee ay doonayaan iney gacanta ku dhigaan degmooyin kale oo ka tirsan Jubooyinka iyo Gedo.